Guga gu'ga: waxay yihiin, markay dhacaan iyo noocyada kala duwan | Saadaasha Shabakadda
Mawjadaha, ifafaalahaas oo xeebta ka dhigaya mararka qaarkood mid ballaadhan mararka kalena ka yar. Kuwani waa dhaqdhaqaaqyo xilliyeed oo biyo aad u tiro badan oo ay ugu wacan tahay soo jiidashada cufis-jiidadka ee ay sameeyaan dayaxa iyo qorraxdu dhulka. Markaad kahadasho mawjadaha, waxaad maqleysaa wax ku saabsan nool iyo neap hirarka. Waa maxay mid waliba maxay ku tiirsan tahay jiritaankoodu?
Haddii aad xiiseyneyso waxaas oo dhan, halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka ku saabsan sida mawjadaha u shaqeeyaan, maxay yihiin guga gu'ga iyo noocyadooda. Ma rabtaa inaad sii wadato akhriska? 🙂
1 Hirarka iyo wareeggeedii
2 Nooleyaasha iyo nefiga badda
3 Noocyada guga
3.1 Guga guga
3.2 Mawjadaha gu'ga
3.3 Xilliga gu'ga ee loo yaqaan 'Equinoctial perigee'
4 Waa maxay sababta aysan u hir lahayn badda Mediterranean?
Hirarka iyo wareeggeedii
Dayaxa iyo Cadceedu waxay ku dhaqaaqaan dhulka culeyskiisa oo sababa in biyahan faraha badani ay si wareeg ah ugu wareegaan. Mararka qaarkood awoodda cuf isjiidashada ee soo jiidashada waxay la falgashaa firfircoonaan la'aanta ay abuurtay dhaqdhaqaaqa wareegga dhulka iyo mawjaddu way sii caddaatay. Ku dhowaanshaha dayaxa iyo meeraheenna awgeed, tallaabada uu ku soo saaro biyaha tirada badan ayaa ka weyn tan Qorraxda.
Dhulku 24-kii saacadoodba wuu is wareegaa. Haddaan banaanka ka istaagno, waxaan arki karnay sida meeraheenna iyo dayaxu u siman yihiin hal mar maalintii. Tani waxay ka dhigaysaa qofku inuu ka fikiro inay jiraan wareegyo isdaba-joog ah oo mid ka mid ah 24-kii saacadoodba. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu soo saaraa wareegga ugu yaraan 12 saacadood. Maxay tani u dhacdaa?
Markuu dayaxu ku jiro aagga toosan ee badweynta, wuxuu soo jiitaa biyaha oo way kacaan. Tani waa sababta oo ah Dhulka iyo dayaxu waxay sameystaan ​​nidaam ku wareega wareega xarunta wareega. Markay taasi dhacdo, dhinaca ka soo horjeedka Dunida dhaq-dhaqaaqa wareegga ayaa dhacaya kaas oo sababa xoog wax isweydaarsiga. Xooggan Waxay awood u leedahay inay ka dhigto biyaha kor u kaca keenaya waxa aan ugu yeerno hirar sare. Taa bedelkeeda, wejiyada meeraha ka soo horjeedka dayaxa ee aan saameyn ku yeelan jiidashada cuf isjiidadka waxay yeelan doonaan hir hoose.
Mawjaddu had iyo jeer lama mid aha iyadoo ay jiraan arrimo qaarkood oo go’aamiya awooddiisa. In kasta oo la ogyahay in wareegyada u dhexeeya hirarka hoose iyo kuwa sare ay yihiin 6 saacadood, runti dhab ahaan sidaas maahan. Dhulku keli kuma aha biyo. Waa inay jiraan qaarado, joomatariyeed xeebeed, astaamo qoto dheer, duufaanno, mawjadaha badda iyo dabaylo saameeya hirarka.
Nooleyaasha iyo nefiga badda
Sidii aan awoodnay inaan tilmaamno, mawjadaha waxay kuxiranyihiin mowqifka dayaxa iyo qorraxda. Marka kuwani ay la jaanqaadaan ixtiraamka Dunida, awooda soo jiidashada cuf isjiidadka ayaa ka weyn. Tani waxay caadi ahaan dhacdaa markaan helno bil buuxda ama cusub. Xaaladdaani waxay sababi kartaa in baddu kacdo oo waxaa loo yaqaan gugga guga.
Dhinaca kale, marka dayaxa, Dhulka iyo qorraxdu samaystaan ​​xagal qumman, jiidashada cuf isjiidadka ayaa ugu yar. Sidan ayaa loo yaqaanaa neap hiv. Tani waxay dhacdaa inta lagu jiro muddooyinka sii xumaanaya iyo kuwa sii yaraanaya.
Si loo caddeeyo fikradahaas oo dhan, waxaan ka tagi doonnaa qeexitaanno aad waxtar u leh:
Hirar sare ama hirar sare: Marka biyaha baddu gaaraan heerka ugu sarreeya ee wareegga mawjadaha.
Mawjad hoose ama hirar yar: Marka heerka biyaha ee wareegga qulqulaya uu gaaro heerkiisa ugu hooseeya.
Waqtiga hirarka badan Waqtiga mawjadaha sare ay dhacaan ama daqiiqada ugu ballaaran ee heerka badda heer kicin ah.
Waqti hirarku hooseeyo: Waqti ay hoos u dhaca ama hoos u dhaca cabirka badda uu ku dhaco meel cayiman.
Faaruqin: Waa muddada u dhexeysa hirarka sare iyo hirarka hoose.
Koraaya: Muddada u dhexeysa hirarka hoose iyo hirarka sare
Waxaa jira doorsoomayaal badan oo ku shaqeeya mawjadaha, sidaas darteedna, waxaa jira dhowr nooc.
Waxaa loo yaqaan 'syzygies'. Iyagu waa hirarka guga ee caadiga ah, taasi waa, kuwa dhaca goorta dhulka, dayaxa iyo qorraxdu waa iswaafajiyeen. Waa markaa marka awoodda soo jiidashada leh ay badato. Tani waxay dhacdaa xilliyada bisha buuxda iyo dayaxa cusub.
Markay mawjadaha guga dhacaan, hal cunsur oo kale ayaa lagu darayaa. Tani waxay dhacdaa markii ay xiddiguhu isla jaan qaadaan taariikhaha u dhow guga ama equinoxes dayrta. Waxay dhacdaa marka qorraxdu gebi ahaanba ku jirto diyaaradda dhul-badeedka dhulka. Xaaladdan oo kale xilliyada guga waa kuwo xoog badan.
Xilliga gu'ga ee loo yaqaan 'Equinoctial perigee'
Nooca guga gu'gu wuxuu dhacaa markay dhammaan waxyaabaha kor ku xusan dhacaan iyo, marka lagu daro, dayaxu wuxuu kujiraa wajigiisii ​​khatarta ahaa. Tani waa marka mawjadaha sare ay ka sarreeyaan weligood sababo u dhow dhow dayaxa iyo Dhulka. Intaa waxaa dheer, in la isku waafajiyo dayaxa, Dhulka iyo Qorraxdu waxay leeyihiin xoog xoog gravitational. Markay kacaan gugaan, xeebaha ugu saameynta badan waxaa hoos u dhaca in ka badan kala bar.
Waa maxay sababta aysan u hir lahayn badda Mediterranean?
Wax aad hubaal ahaan hore u ogaan doonto ayaa ah in mawjadaha badda Mediterranean-ka ay yihiin kuwo aad u qiimo badan. Tani waxay dhacdaa maadaama ay tahay bad gebi ahaanba xiran.. Meelkeeda kaliya ee "cusub" ee laga soo galo biyaha waa marinka Gibraltar. Maaddaama marin-biyoodkani aad u yar yahay, kama qaadi karo tiro badan oo litir biyo ah Badweynta Atlaantik. Sidaa darteed, muggan weyn ee biyaha ayaa lagu hayaa cidhiidhiga. Xaqiiqadani waxay ka dhigeysaa marin biyoodka inuu u dhaqmo sidii tuubada xiran. Intaas waxaa sii dheer, waxay abuurtaa marin biyood xoog leh laakiin aan awoodin inay gaaraan badda Mediterranean.
Waxaa la dhihi karaa ma jiro waqti ku filan oo ay badda Mediterranean-ka ku yeeshaan mowjado. Waa la qaddarin karaa xoogaa xilliyada la xushay, laakiin ma ahan mowjado xoog badan. Inta lagu jiro faaruqinta, waxa ka soo horjeedka iyo Marinka Marinka qulqul xoog leh oo u socda dhanka Atlantic ayaa la soo saaray.
Sidoo kale waa in la sheegaa in isagoo bad yar ah, soo jiidashada dayaxa ay yar tahay. Waxaa jira dhibco iyo xeebo badan oo kaliya waxay gaaraysaa centimitir.
Sannadkii 2016-kii Alfonso Cuenca wuxuu saadaaliyay gu ’roob ka yar kii caadiga ahaa. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu yiri dayrta iyo jiilaalka sidoo kale way sii qallali doonaan. Intii lagu gudajiray 2017, roobabku waxay ahaan lahaayeen kuwa aad uyar, marka laga reebo Ista iyo agagaarkeeda.
Saadaashan, khabiirkeena cabañuelista ma khaldamin tan iyo sanadihii 2016 iyo 2017 waxay ahaayeen sanadaha ugu qalalan taariikhda.
Waxaan rajeynayaa inaad sifiican u fahmi karto macnaha gu’ga guga iyo noocyada jira. Hadda waa inaad falanqeysaa si aad ugu dhaqan gasho wixii aad soo baratay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Guga guga